नायिका रेश्मा घिमिरे कार्तिक महिनामा नै बेहुली भइन्, को संग बिहे गरिन् त? (भिडियो हेर्नुहोस)
Homeसमाचारनायिका रेश्मा घिमिरे कार्तिक महिनामा नै बेहुली भइन्, को संग बिहे गरिन् त? (भिडियो हेर्नुहोस)
November 8, 2020 admin समाचार 9337
नायि’का रेश्मा घिमिरे र मोडल तथा डान्सर विजु पार्कीले कार्तिक महि’ना मै बि’हे गरेका छन् । आईतबार मे’हन्दि थियो भने शनिवार गोदावरीमा बि’वाह भएको हो ।
यो बिवाह साँ’च्चिकै भने होईन । यो बिवाह एक ए’ल्बममा स’मावेश गीतको लागि भएको थियो । ‘लगनगाँठो’ नामक एल्बममा पाँच’वटा गीत रहेका छन् भने पाँचवटै गीतले एक पूर्ण बिवाह सम्प’न्न भएको जनाउनेछ । यि गीतहरुलाई सुब्रत आचार्यले नि’र्देशन गरेका छन् ।
भिडियोहरुमा रेश्मा र विजुको साथमा गायिका प्रवि’शा अधिकारी, मोडल गरिमा शर्मा, मोडल अभिषेक श्रेष्ठ लगा’यतको अभिनय रहेको छ । भिडियोहरु मंसिर महिनामा सार्वज’निक हुनेछन् । -Osnepal बाट
May 24, 2021 admin समाचार 6385
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरो’ना (कोभिड–१९) का कारण स्थगित स्नातक तहका परीक्षा आगामी साउन महि’नाभित्र सञ्चालन गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि रो’किएको र विद्यार्थी १९ महिनाभन्दा बढी एउटै वर्षमा अ’ध्ययन गर्न बाध्य भएकाले स्नातक तह प्रथम
December 25, 2021 admin समाचार 2748
चिनि`याँ प्रान्तले सन्तान जन्माउने दम्पती`लाई ३१ हजार ४ सय (३७ लाख नेपाल रुपैयाँ बढी) अमेरिकी डलर बेबी लोन उप`लब्ध गराउने भएको छ। चीनको उत्तर`पुर्वी प्रान्त जिलिन सर`कारले बिहे गर्ने र बच्चा जन्माउने दम्पतीलाई प्रोत्सा`हन स्वरुप
May 25, 2021 admin समाचार 5592